स्वप्न दोष हन्छ ? यसले स्वास्थ्यमा असर र सही उपचार बारे जानौं !! – NawalpurTimes.com
स्वप्न दोष हन्छ ? यसले स्वास्थ्यमा असर र सही उपचार बारे जानौं !!
प्रकाशित : २०७८ कार्तिक २७ गते १०:३२
मन परेको मान्छेसँग यौनसम्पर्क गरेको सपना देखिन्छ । असाध्यै आनन्द आउँछ तर एक्कै छिनमा वीर्य स्खलन हुन थालेपछि निद्राबाट झट्ट ब्युझँदा विर्यले कट्टु (पेन्टी) भिजेर छ्यालब्याल भएको हुन्छ । हिलै हुनाले घिन लाग्दो भइसकेको हुन्छ । यो अनुभव किशोरावस्थामा प्रवेश गरेपछि स्वस्थ मानिसहरु सबैले गरेका हुन्छन्, कसैले धेरै, कसैले थोरै मात्रै हो ।
स्वप्नदोष हुन थालेपछि मनमा अनेकौं जिज्ञाशा उठ्नु स्वभाविकै हो ।